15 jir baaskiil ku jartay 1200 km si Aabbaha dhalay oo xannuunsan ay ugu celiso hoygiisa | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / 15 jir baaskiil ku jartay 1200 km si Aabbaha dhalay oo xannuunsan ay ugu celiso hoygiisa
Posted by: Mahad Mohamed June 10, 2020
Himilo – Gabar Hindi ah ayaa jartay boqolaal kiilo Mitir iyada oo adeegsaneysa baaskiil si Aabbaheed oo xannuunsan ay dib ugu celiso hoygiisa. Waxaa lagu tilmaamay safar halyeynimo ah oo ay ku badbaadineysay waalidkeed xilli ay taagan tahay xannibaada xannuunka safmarka ah ee Karoona.
Aabbaha dhalay Jyoti Kumari ayaa ku dhaawacmay shil gaadiid. Markii la daweeyay kaddib ayay gabadha 15 jirka ah iibsatay baaskiil ku kacaya 20 doolar si ay ugu celiso gurigooda, warbaahinta CNN-ka ayaa qortay.
Sheekada gabadha ayaa si weyn u shaac baxday iyada oo kamid noqotay dadka lagu hadal-hayo baraha bulshada. Waxay ammaan iyo boggaadin kala kulantay gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka.
Mohan Baswan ayaa ku dhaawacmay shil gaadiid bishii Janaayo ee tagtay. Waxa uu degganaa gobal 700 Mile ka fog hoygiisa.
Shilka kaddib, Mr Moham waxa uu u baahday daryeel caafimaad oo loo fidiyay laakiin nasiib xummo ma uusan woodin in uu guriga ku soo laabto. Sidaa darteed, gabadhiisa dhiirran ayaa u jartay masaafo dhan 1200 km si ay dib ugu soo celiso hoyga.
Tallaabooyinka xannibaada ee ku saabsan xannuunka safmarka ah ee Karoona ayaa kala jaray xiriirka dad badan.
Previous: Barcelona oo Real Madrid kaga horreysa saxiixa da’yar reer Spain ah
Next: Tottenham oo wali xiiseynaysa Olivier Giroud